Isishwankathelo seNdibano yePCB-iPandawill Technology Co, Ltd
Ushwankathelo lweNdibano yePCB
Ngawo omabini umngxuma (i-THT) kunye ne-Mount Mount (SMT) yamandla endibano, zombini zikhokelwa kunye ne-RoHS iyahambelana, uluhlu lwenkonzo yethu ye-PCBA ukusuka kumzekelo wokuqala ukuya ekuveliseni iindibano ezintsonkothileyo, ezobuchwephesha bePCB kwimigangatho ephantsi ukuya ephakathi.
Sinikezela ngeenkonzo eziphambili nezikhethekileyo zokujika. I-Turn-Key epheleleyo igubungela ubuqhetseba be-PCB kunye nendibano, kubandakanya ukwenziwa kwee-PCBs, iinxalenye zokufumana indibano yokugqibela ye-anf. Ngokukhetha ukujika okuPhambili, umthengi unokubonelela ngoluhlu olunamalungu. Siza odola iindawo eziseleyo kwaye enze ibandla ngokweemfuno zabathengi xa.
Ngokubanzi, sinikezela ngenkonzo yeNdibano ye-PCB:
✓I-SMT (iTekhnoloji yoPhezulu lweNtaba), i-THT (iTekhnoloji ye-DIP) kunye ne-SMT kunye ne-THT ezixutyiweyo.
✓Ukuveliswa kwe-RoHS kunye ne-Non RoHS.
✓Iprototype, isezantsi ukuya kwimveliso yevolumu ephakathi (1-5000 PCS).
✓Isisombululo seThenkey / sokuThengwa kweeNkonzo zoThengiso.
✓Elona candelo lincinci le-0201, i-BGA, iBGA, i-QFN, i-POP kunye neetshipsi ezingakhokelwanga.
✓Izisombululo zovavanyo: i-X-ray, i-AOI, i-ICT, ukuhlolwa kombono kunye novavanyo lomsebenzi.
Isiseko sabathengi bethu siquka iinkokheli zeshishini kwiRF, kwezonyango, kwiMizi-mveliso, kwiKhaya leSmart, kwi-Intanethi yeZinto nakwizinto zombane zeemoto. Sizinikezele ekuboneleleni ngoMgangatho oPhezulu, ukuHanjiswa kunye neNkonzo yaBathengi ngexabiso elikhuphisanayo.